Miller Fluid Heads (Europe) Ltd. သည် IBC 2090 တွင် Cineline 2015 Tripod စနစ်ကိုဥရောပစျေးကွက်သို့မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » IBC 2090 မှာဥရောပစျေးကွက်မှ Miller ကအရည်ခေါင်းဆောင်များ (ဥရောပ) Ltd စျေး Cineline 2015 tripod စနစ်
IBC 2090 မှာဥရောပစျေးကွက်မှ Miller ကအရည်ခေါင်းဆောင်များ (ဥရောပ) Ltd စျေး Cineline 2015 tripod စနစ်
Miller အရည် Head (ဥရောပ), ​​LTD ။ ပွဲဦးထွက်
IBC 2090 ကို AT ဥရောပစျေးကွက်မှ CINELINE 2015 tripod SYSTEM
နယူး tripod စနစ်ရိုက်ကူးရေးကို Creative အကြောင်းအရာ Capture ကိုကူညီပါရည်ရွယ်
အမ်စတာဒမ်, သြဂုတ်လ 31, 2015-Miller ကအရည်ခေါင်းဆောင်များ (ဥရောပ) Ltd, ကင်မရာထောက်ခံမှုဖြေရှင်းချက်တီထွင်ဆန်းသစ်၏ထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၎င်း၏ဖြန့်ချိလိမ့်မည် Cineline 2090 tripod စနစ် မှာဥရောပစျေးကွက်မှ IBC 2015 (11.D30 ရပ်) ။ အဆိုပါပြည့်စုံ tripod စနစ်ကအသစ်တခုလည်းပါဝင်သည် HD Mitchell ကအခြေစိုက်စခန်း 1-အဆင့်အလွိုင်း tripod နဲ့ HD အဆိုပါကြံ့ခိုင် Cineline 70 အရည်ဌာနမှူးဖြည့်ဖို့အလွိုင်းမြေပြင်ဖြန်။ တစ်ဦးရန်လိုစျေးနှုန်းမှာအားလုံးအပိုဆောင်းသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူရာပူဇော်သက္ကာကိုစဉ်ဤစနစ်သစ်သည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူရိုက်ကူးရေးကိုထောက်ပံ့ပေးအပေါင်းတစ်မဖြစ်မနေဖြစ်ကြောင်းချောမွေ့နှင့်ကိုက်ညီဒယ်အိုးနှင့် tilt ။
"Miller ကအထူးသရိုက်ကူးရေးနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ထူးခြားတဲ့လိုအပ်ချက်များနှင့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖို့ Cineline 2090 tripod စနစ်ဒီဇိုင်း," ချားလ်စ် Montesin, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာကပြောပါတယ်။ "အသုံးပြုသူများသည် Setup နှင့်သယ်ဆောင်မှုဝန်ချိန်အမျိုးမျိုးမှရယူပေးခြင်းနှင့်အတူ 2090 စနစ်သီးသန့်တဦးတည်းသော့ချက်အင်္ဂါရပ်စနစ်ရဲ့ Cineline 70 အရည်ဌာနမှူးအပေါ် illuminated နောက်ဘက်-တပ်ဆင်ထားထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပေါငျးတို့သထိန်းချုပ်မှုမြင်အလွယ်တကူဘာသာရပ်များတောက်တောက် "များမှာရှိရာမှောင်မိုက်တည်နေရာမှာတည်ရှိပါတယ်တစ်ဦးရိုက်ကူးအပေါ်ချိန်ညှိခံရဖို့ခွင့်ပြု
လျင်မြန်သောသော့ခတ် / လွှတ်ပေးရန်အရေးယူမှုနှင့်အတူအလှည့်-သော့ခတ်ခရိုနီစေလွှတ် high-စွမ်းရည်ခြေထောက်-သော့ခတ်သည့်စနစ်, အဖြစ်မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်တစ်ခု built-in ပူဖောင်းအဆင့်နှင့်အတူတစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာတာဝန်အခြေစိုက်စခန်း HD Mitchell ကအခြေစိုက်စခန်း 1-အဆင့်အလွိုင်း tripod တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသော setup ကိုဆက်ကပ်။ မိုးသည်းထန်စွာသယ်ဆောင်မှုဝန်ချိန်ယူနိုင်ရန်အစွမ်းသတ္တိ, torsional ကျောမှုနှင့်အတူတညျဆောကျ, အ 2090 tripod စနစ်ကအမျိုးမျိုးကွဲပြားမသမာမှုများနှင configurations ထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာတည်ငြိမ်မှုများနှင့်လုံခြုံရေးပေး, 4.5 ကီလိုဂရမ် (9.9 ပေါင်) မှ 37.5 ကီလိုဂရမ် (82.5 ပေါင်) ကနေစွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ လျင်မြန်သော setup ကိုနှင့်ဆွဲ-Down များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်ကြံ့ခိုင် HD အလွိုင်းမြေပြင်ဖြန်အလွယ်တကူအလွိုင်း tripod ပူးတွဲခြင်းနှင့်အပြားမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ချေးကိုခံနိုင်ရည်အလွိုင်းများဆောက်လုပ်ထားသည်ပေါ့ပါး Cineline 70 အရည်ဌာနမှူး "All-In-One-တည်နေရာ" ထိန်းချုပ်မှု layout ကိုအတူ Ultra-ပျော့စတင်ချောမွေ့မှတ်တိုင်များနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထောင့်ဖြတ်ဆွဲအကူးအပြောင်းအဖြစ် counterbalance စနစ်များနှင့်အတူအဆင့်မြင့်တိကျစွာအရည်ဆွဲထိန်းချုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာ Arri အပါအဝင်စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ကင်မရာ Mount, ထားရှိရန်သတ်မှတ်, Sony ကအနီရောင်နှင့် ကို Canonနှင့်လည်းတစ်ဦး Arri-သဟဇာတ, ဘေးထွက်တင်ကင်မရာပလက်ဖောင်း features တစ်ခု optional ကိုအတူလွယ်ကူသော-to-မထိုက်မတန် Mitchell ကအခြေစိုက်စခန်း Adapter ကိုရိုးရာ Mitchell ကပြားအခြေစိုက် tripod ကိုက်ညီရန်။ ထို့အပြင်အရည်ခေါင်းကိုမှန်ဘီလူးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအပြောင်းအလဲများကိုအလေးချိန်ဖြန့်ဝေမှုသည့်အခါရေနံတူးစင်၏လျင်မြန်နှင့်စပ်ရာမရှိသော rebalancing မြှင့်တင်ရန်တစ်ခုတိုးချဲ့လျှောအကွာအဝေးတပ်ဆင်ထားလာပါတယ်။ တစ်ဦးကဆက်ပြောသည်ဆုကြေးအဖြစ်, အရည်ခေါင်းကိုမော်နီတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် dual-ခြမ်းတောင်ပေါ်ကမ်းလှမ်းအဖြစ်လက်ထောက်ရဲ့ box ကိုရှေ့ mount ။
နောက်ထပ် Cineline 2090 tripod စနစ်၏ options နဲ့စွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်ရန်, Miller ကတိကျတဲ့ပစ်ခတ်မှုအခြေအနေများအဘို့စနစ်စိတ်ကြိုက်ထည့်သွင်းစေခြင်းငှါ Cineline ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏အရေအတွက်ကိုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Cineline 70 tripod စနစ်အပါအဝင်အားလုံး Miller ကထုတ်ကုန်, ခွင့်ရှိသည် Miller က၎င်း၏ထုတ်ကုန် '' ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်ကြာရှည်ခံမှု၏အသက်ရှည်အတွက်ယုံကြည်မှုသည်အတိုင်း, သူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူများအတွက်ခံစားရနှင့်ကျယ်ပြန့်သုံးနှစ်ကြာအာမခံအတူပါလာ။
1954, Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းဒီဇိုင်းများခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ကင်မရာအော်ပရေတာများအတွက်ထောက်ခံမှုပေး, ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အကြီးအကဲများနှင့် tripod ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်တတ်၏။ စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပိုမိုထက်ခြောက်ဆယ်အနှစ်ကိုဂုဏ်ပြုသော, Miller ကခေတ်ပြိုင်ကင်မရာထောက်ခံမှု၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးသက်တမ်းကြာ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးသူက 1946 အတွက်ရရှိသောအရာရုပ်ရှင်ကင်မရာများအတွက်အရည်ခေါင်းကိုဒီဇိုင်းများအတွက်ပထမဦးဆုံးမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသည်။ ယနေ့ Miller ကယ့် tripod နဲ့ camera ထောက်ခံမှုစနစ်များကိုမကြာခဏ 65 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ကွန်ယက်များ, ထုတ်လုပ်မှုအိမ်များ, ကော်ပိုရိတ်ပညာရေးနှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်အီလက်ထရောနစ်သတင်းစုဝေး (ENG), အီလက်ထရောနစ်လယ်ကွင်းထုတ်လုပ်မှု (EFP), နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကို applications များစဉ်အတွင်းအသုံးပြုကြသည် ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက + 6129439 6377 သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခေါ်ပါ www.millertripods.com.
ကင်မရာ IBC 2015 isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော Miller က တီဗီနည်းပညာ 2015-08-31
ယခင်: ENCO ရေဒီယိုအဘို့ဗီဒီယို IBC2015 မှာတိုးတက်လာသရုပ်ပြရန်
နောက်တစ်ခု: ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက်ကြေညာချက်များ Pix-E5H အခုတော့သင်္ဘော